‘Isibonelelo sibalulekile ebholeni’
LAPHA abadlali beMaritzburg United uRushine De Reuck noNazeer Allie bathathwe bexaka uDaniel Cardoso weKaizer Chiefs, okungamaqembu asengozini yokulalelwa yikati eziko Isithombe: BACKPAGEPIX
Nduduzo Dladla | June 30, 2020
USIHLALO weMaritzburg United, uFarook Kadodia, ubona kungasho ukuphela kwebhola ukungatholakali kwezibonelelo zemali zanyanga zonke ezinikezelwa amaqembu ePremier Soccer League (PSL).
Ngasekuqaleni kwenyanga ephelayo usihlalo wePSL, u-Irvin Khoza, umemezele ukuthi ayisekho imali yesibonelelo sanyanga zonke ezotholwa ngamaqembu ngemuva kukaJuni, ngabo akudlalwa ngenxa yegciwane iCorona.
Okunye okungenzeka kube nomthelela wukuthi nabaxhasi bePremiership, i-Absa, kabayivuselelanga inkontileka yabo nePSL, okusho ukuthi idinga abaxhasi abasha.
UKadodia uthe lezi zindaba zokuthi ngeke sisatholakala isibonelelo ngemuva kukaJuni kazizinhle neze ngoba cishe wonke amaqembu ngeke akwazi ukuqhubeka nezidingo zanyanga zonke.
“Nginesiqiniseko esiwu-70% sokuthi amaqembu ngeke akwazi nhlobo ukumelana nezidingo zansuku zonke. Lokhu kungasho ukuthi nebhola uqobo ngeke lisaba mnandi ngenxa yokuthi abasebenzi kabasaholelwa,” kusho uKadodia.
"Iqiniso lapha okumele siliqonde wukuthi isibonelelo sePSL sisebenza omkhulu umsebenzi. Kunganzima impela ukuqhubeka namaqembu ethu uma singase singayitholi le mali."
Iqembu elikwiPremiership lithola isibonelelo sika-R2.5 million, kuthi eligijima kwiGladAfrica Championship lithole engu-R500 000.
Abathandi bebhola baqine idolo ngokuthi uhulumeni uthe isingabuya imidlalo yePSL ilawulwa yimithetho eqinile ehambisana nokulwa neCorona.
Kulindeleke ukuthi iPSL iqhamuke nosuku lapho imidlalo izobuya khona. Okunye okubhekwe ngamehlo abomvu wukuthi imidlalo izoqedelwa kuphi njengoba kuthiwa kumele iqedelwe endaweni eyodwa.
Babodwa ababona ingase iqedelwe eThekwini kanti abanye babona iGauteng isethubeni elihle.
Ne-Free State ayizibekile phansi njengoba isibalwa nezindawo okulindeleke ukuthi imidlalo iqedelwe kuzo. Okungenza idle ubhedu iFree State wukuthi izibalo zeCorona zabasulelekile zisephansi kakhulu khona uma kuqhathaniswa nezinye izindawo.
Olunye udaba aphinde waluthinta uKadodia yilolo lokudayisa abadlali kwezakhe.
Selokhu kwathi nhlo iMaritzburg ayimgcini umdlali oyidlalela kahle, kunalokho imdayisa ngemali eshisiwe, kade efike kuyona igama lakhe lingaziwa.
Ngonyaka odlule uKadodia waveza ukuthi njengeqembu baziphilisa ngakho belu ukudayisa abadlali.
“Lapha ekudayiselaneni kuyaye kuhambe ngokuthi loyo ofisa ukuthenga aqonde ukuthi yini elindeleke kuye kuthi naloyo othengwayo kube wukuthi uyafuna yini,” kulandisa uKadodia.
"Singakujabulela ukuthi sibagcine abadlali bethu, sibanike okungcono kodwa akuvumi ngenxa yesimo sokuthi ukudayisa kuyasisebenzela njengoba singenabo abaxhasi. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele ngizose ngenxa yokulamba."